Xaaladda Baydhabo oo kacsan maalintii saddexaad iyo Shariif Xasan oo aan dabcin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Xaaladda magaalada Baydhabo e xarrunta gobolka Baay ayaa maalintii 3-aad kacsan, waxaana xiran inta badan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada.
Weriyaasha ku sugan Baydhabo ayaa saaka soo sheegaya in magaalada laga dareemyo abaabylka debadbaxyo ka dhan ah siyaasiyiinta uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ee doonaya in maamul 3 gobol ah la dhiso, islamarkaana waxba kam jiraan laga soo qaado maamulka 6-da gobol ee Madoobe Nuunow madaxda ka yahay.
Maamulka Madoobe Nuunow iyo siyaasiyiinta gobolka ee taageersan ayaa Shariif Xasan ku eedeeyey inuu diyaarad hub uga qaatay Muqdisho, islamarkaana doonayo inuu halkaas ka abuuro rabshado, inkastoo Shariif Xasan arrinkaas beeniyey.
Shariif Xasan ayaa in aanu marnaba raali ka aheyn inuu dhib horseedo, hase ahaatee waxaa uu xusay in mowqifkiisa aanay jirin wax iska bedelay, isla markaana uu sii wadayo dadaalkiisa dhismaha Maamulka saddexda gobol.
Khilaafka siyaasiga oo shacabka lugaha loo geliyey ayaa abuurmay kadib markii labo maalmood ka hor uu Baydhabo ka degay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay sida diyaarad gaar ah, waxaana markaas dhacay iska horimaad dhex maray maleeshiyo isaga taabacsan iyo maleeshiyo taabacsan Madoobe Nuunow.
Waxaa markaas kadib xigay debadbax dadweyne sameeyeen, kaasoo ilaa shalay socday, islamarkaana maanta weli halkaas laga dareemayo abaabulkiisa.
Shariif Xasan ayaa loo diiday inuu gudaha u galo Baydhabo, waxaana amaankiisa gacanta ku haya ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah AMISOM.
Muranka dhibkaan keenay ayaa salka ku haya labo fikir oo yaalla Baydhabo, midka hore ayaa ah maamul 6 gobol oo Madoobe Nuunow madax u yahay iyo maamula 3 gobol oo hadda dhismihiisa la wado, kaasoo ay taageersantahay dowladda Soomaaliya.
Saddex jir shalay la waayey oo saaka meydkiisa laga helay degmada Hiliwaa